SALAMO 77. 1- 20	F. 1 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 77. 1- 20	F. 1
MANANTENA ILAY ANDRIAMANITRA TSY MIOVA
«Antso vonjy…» (1-9). Na eo aza izay mety fitarainana mafy dia hitantsika fa tsy tonga faingana ny vonjy nangatahiny (1-2), kanefa dia mbola nitohy natoky an’Andriamanitra foana ny mpanao Salamo eto. Tsy mahita tory amin’ny alina, manandratra ny tanana ho fitalahoana mba hamaliana azy. Tsy nanafina ny adin-tsainy izy fa sahy namboraka izay tao am-pony (6-9), ary izany koa no afaka manamaivana antsika raha tena manana fifandraisana lalina amin’ ny Tompo isika.
“Manova toe-po…” (10-12). Ny fitodihany nijery ireo lasa ka nametsovetsoany ireo asan’i Jehovah sy ny nahatsiarovany ireo fahagagana nataony
(11) no nampiova ny toe-pon’ny mpanao Salamo eto. Ho antsika koa dia manova ny toe-pontsika manoloana ny zava-manahirana hatrehintsika ny fahalalana sy ny fahatsiarovana fa Jesoa Kristy ilay hitalahoantsika manoloana izay zavatra sarotra lalovantsika dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakiazay (Hebreo 13.8).
«Ireo lasa tsy fanadino no mamelona ny fanantenana»(13-20). Voalohany dia ny fahatsiarovana fa tsy misy tahaka an’ Andriamanitra
(13) ary naseho eto ny fahamasinan’ ny làlany sy ireo fahagagana nataony nanoloana ireo firenena samihafa, indrindra fa ny namoahany ny Zanak’ Israely tany Egypta. Namela dindo sy fanantenana ho an’ny taranaka taty aoriana tokoa ny fahatsiarovana ny fomba fitondran’Andriamanitra ny olony tany aloha tany.
Saintsaino: « Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela; Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa; Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy tahaka Ahy, » Isaia 46.9